Sana Bitta Bikas Multipurpose Co-Operative Ltd. – From Where It Begins–A Complete Financial Solution
Interest Rates 6.00% (Daily)*
Our New Crorepati Scheme
यस संस्थाको कूल अधिकृत शेयर पूँजी रु. १५,००,००,००० /- (पन्ध्र करोड) कायम गरिएको छ । जसलाई रु १००/-(एक सय) का दरले जम्मा १५,००,००० (पन्ध्र लाख) कित्ता शेयरमा विभाजित गरिएको छ । जसलाई आवश्यकता अनुसार चुक्त्ता पूँजी मा परिणत गरिदै लागिनेछ ।
निती नियमको अधिनमा रहि निर्भिक भएर इमान्दरीपूर्वक कर्तब्व्य पालना गर्नु सफल व्यवस्थापनको प्रतिबिम्ब हो । व्यवस्थापन पक्ष यो यथार्थलाई सदा शिरोपर गर्न पूर्ण संकल्पित छ । संस्थाको निती / कार्यक्रमहरु प्रभाबकारीताका साथ कार्यन्वयन गर्न दक्ष तथा अनुभवी कर्मचारीहरु कार्यारत रहेका छन् ।
सदस्यवर्गलाई छिटो छरितो तथा सरल ढंगले वित्तिय सेवाहरु प्रवाह गर्नका लागि तथा दैनिक रुपमा हुने करोबारलाई व्यवस्थित ढंगले लेखाङ्कन गर्न संस्थालाई पूण रुपमा कम्प्युटरइज्, गरिएको छ । यसको साथै सदस्यसँगको वित्तिय करोबारलाई विश्वसनिय तथा व्यवस्थित गर्नको लागि बैकिङ्ग सफ्टवेर जडान गरिएको छ ।
Fixed deposits are not just an instrument of investment for youngsters; if you are consideredasenior citizen, you too can open an FD which is referred to as the senior citizens fixed deposit. They are also used by senior citizens to park their excess money inasafe place where it can earn
Inafixed deposit investment, interest is only paid at the very end of the investment period. This is unlike regular savings accounts, where interest is calculated daily and typically paid to you at the end of each month. Because the investment term and interest rate are fixed, you can very easily calculate the amount
यस प्रकारको खातामा न्यूनतम रु.२५००।- (पच्चिस हजार) अनिवार्य मौज्दात कायम राख्नुपर्ने छ । यस प्रकारको खाता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, समूह तथा सङ्घसंस्थाको नाममा सञ्चालन गर्न सकिने छ । संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी तथा बजार प्रतिनिधिको तलब तथा कमिसन र संस्थाबाट भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गर्दा बचत खातामार्फत गरिने छ । यस
WOMEN SPECIAL SAVINGS यो खाता खोल्दा सुरुमा रु.२००० ।- (दुइ हजार ) र त्यसपछि एक पटकमा रु.५०।- (पचास ) मा नघटाई रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । यस प्रकारको खातामा न्यूनतम रु.२०००।- (दुइ हजार) अनिवार्य मौज्दात कायम राख्नुपर्ने छ । यस प्रकारको खाता व्यक्तिको नाममा सञ्चालन गर्न सकिने छ । यस प्रकारको खातामा जम्मा हुन आएको रकममा ६.५०%
यो खाता खोल्दा सुरुमा रु.२००० ।- (दुइ हजार ) र त्यसपछि एक पटकमा रु.५०।- (पचास ) मा नघटाई रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । यस प्रकारको खातामा न्यूनतम रु.२०००।- (दुइ हजार) अनिवार्य मौज्दात कायम राख्नुपर्ने छ । यस प्रकारको खाता व्यक्तिको नाममा सञ्चालन गर्न सकिने छ । यस प्रकारको खातामा जम्मा हुन आएको रकममा ६.५०% दैनिक मौज्दातका आधारमा
यो खाता खोल्दा सुरुमा रु.५००।- (पाँच सय) र त्यसपछि एक पटकमा रु.५०।- (पचास ) मा नघटाई रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । यस प्रकारको खातामा न्यूनतम रु.५००।- (पाँच सय) अनिवार्य मौज्दात कायम राख्नुपर्ने छ । यस प्रकारको खाता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, समूह तथा सङ्घसंस्थाको नाममा सञ्चालन गर्न सकिने छ । संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी तथा बजार प्रतिनिधिको तलब
Lookout for our all services